Sony Ericsson Xperia X10 oo leh Vodafone Spain, qiimaha | Androidsis
Sony Ericsson Xperia X10 oo leh Vodafone Spain, qiimaha
antocara | | Hawl wadeenada taleefanka, Sony
Laga soo bilaabo xatakamovil kuwa kala duwan ayaa noo yimaada Qiimaha uu Sony Ericsson Xperia X10 la yeelan doono Vodafone ee Spain. Qiimahani waxay la mid yihiin kuwa horey loo daabacay Htc Legend. Xaaladaha oo dhan, waxay noqon doontaa qasab in qandaraas lagu sameeyo sicirka xogta oo ay ku kacayso € 15 bishiiba taas oo qasab ah in la ilaaliyo ugu yaraan 6-da bilood ee hore
Sida had iyo jeer dhacda, sicirku wuu kala duwan yahay waxayna kuxirantahay hadaan sameyneyno gawaarida, diiwaangelin cusub ama haajirid. Sidoo kale dhammaan kiisaska ballanqaadka joogitaanka Vodafone waa 18 bilood iyo ballanqaadka xaddiga codka la doortay waa 6 bilood.
Diiwaan galinta cusub qiimuhu waa € 249, € 199 ama € 99 iyadoo kuxiran hadii aan doorano heerka codka oo bil walba qarashkiisu yahay € 9, € 19,20 ama € 59,99.
Qaadista, qiimuhu waa 149 49, € 0 ama € 9 waxay kuxirantahay hadii aan doorano heerka codka oo bil walba qarashkiisu yahay € 19,20, € 59,99 ama € XNUMX.
Socdaalka, qiimuhu waa € 199, dhammaan qiimaha codadka, ha ahaato qiimahooda bil kasta oo ah € 9, € 19,20 ama € 59,99.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Sony » Sony Ericsson Xperia X10 oo leh Vodafone Spain, qiimaha
Pedro Garcia dijo
Runtu waxay tahay inay noqon lahayd terminaalka aan doortay, haddii kale maxaa yeelay, sidaad ku xustay qoraal hore, maahan wax badan.
Marka lagu daro nooca Android
Jawaab Pedro Garcia
Iyo goorta la iibinayo!
Sida laga soo xigtay macluumaadka dukaanka vodafone, waxay ii sheegeen inay i sugi doonaan illaa Isniinta, Abriil 5, hubaal inay horeyba u dalban karaan. Isniinta halkaas ayaan aadaa aniga oo aan guuldareysan!
Inta udhaxeysa Multitouch iyo shaashadda, ma jiro Amoled wax badan lumiso.
Ka jawaab Double-C
Turjubaan luqadeedka xayawaanka, Google ayaa mar kale naga yaabisay
Asphalt 5, Gameloft wuxuu u ciyaaraa si xoogan